ဘဝမှတ်တိုင်: မြန်မာမိုဘိုင်းဖုန်း ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ခြောက်လ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည်
မြန်မာမိုဘိုင်းဖုန်း ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ခြောက်လ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည်
ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ တနင်္လာနေ့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ။
မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ငွေအသုံးပြုမည့် မြန်မာမိုဘိုင်းဖုန်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကို ပထမခြောက်လအတွင်း အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသည့် အင်းဝဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးဝေလွင်က ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက် ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သော မိုဘိုင်းငွေကြေးစတင်အသုံး ပြုခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်က “Myanmar Mobile Money" ကို ပထမခြောက်လအတွင်း အခမဲ့အသုံး ပြုနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်လကို ကျပ် ၂,၀၀၀ ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကို GSM နှင့် CDMA မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျေးလက်ဒေသအထိ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ငွေထုတ်ယူ၊ ငွေသွင်း နိုင်သည့်အေးဂျင့်အများအပြားထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“အေးဂျင့်တွေ အများကြီးထားသွားရမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကို ပြည်တွင်းမှာ သာမကဘဲ International Mobile Service ကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်”ဟု ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီးဝေလွင်က ပြောသည်။
ပြည်တွင်းမှဘဏ်များအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ပြုလုပ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် အင်းဝဘဏ်ကို ပထမဆုံးလုပ်ကိုင် ခွင့်လိုင်စင်ချထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဘဏ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးဆောင် ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ ပြည်သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဆီကို ငွေရေး ကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ စရိတ်စက အသက်သာဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင် ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ Mobile Banking က ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဦးက ဆိုသည်။
Myanmar Mobile Money တွင် GSM နှင့် CDMA နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုရာတွင်လည်း SMS ပေးပို့သည့် စနစ်၊ USSD စနစ်နှင့် မိမိစမတ်ဖုန်းအတွင်း application ထည့်သွင်းသည့်စနစ် စသည့် ပုံစံသုံးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Myanmar Mobile Money ၏ ၀န်ဆောင်မှုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “Mobile Money၀န်ဆောင်မှု ကိုGSM ဖုန်းဆို စနစ်သုံးမျိုးလုံးမှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။CDMA 800 MHz ဖုန်းဆိုapplication နဲ့ SMS စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီးCDMA 450 ဆိုရင်SMS တစ်မျိုးတည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ အကောင့်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါ အင်းဝဘဏ်ခွဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ နီးစပ်ရာအေးဂျင့်ဆီမှာဖြစ်ဖြစ် ငွေဖြည့်သွင်း ထားနိုင်ပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
Mobile Money ကို သုံးစွဲခြင်း အားဖြင့်
1.ငွေစက္ကူ အများအပြား ထိန်းသိမ်းရန်မလိုတော့ခြင်း
2.24/7 Service ရှိခြင်း (1212)
4.ငွေသွင်း/ထုတ်ရန် ဘဏ်အထိသွားလာရသည့် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
5.ဘဏ်မရှိသော ကျေးရွာလေးများအထိ ဖုန်းရှိရုံဖြင့်ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Mobile Money အကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊
Mobile Money Service အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ရှေးဦးစွာ Myanmar Mobile Money နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘဏ်များတွင် အကောင့်ဖွင့်ပြီး Register လုပ်ရပါမည်။
Bank Account ရှိပြီးသူများလည်း Mobile Money အသုံးပြုရန်အတွက် သီးသန့်အကောင့်တစ်ခု ထပ်ဖွင့်ရပါမည်။
အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်၊ မိမိကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနှင့် ဆိုင်းထိုးရန်အတွက် အကောင့်ဖွင့်လိုသူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ အနည်းဆုံး ငွေငါးထောင် စသွင်းပြီး ဖွင့်နိုင်သည်။
အကောင့်ဖွင့်၍ Register လုပ်ပြီးပါက မိမိ၏ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းအကောင့်အတွက် Pin Code. 4-8 (number only) ရမည်။ ထို Pin Code. အခြား မည်သူမှမသိအောင် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
Ref : http://myanmarmobilemoney.com
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/27/2014 08:51:00 pm